Izute ọhụrụ Samsung Galaxy Buds Bluetooth ekweisi | Akụkọ akụrụngwa
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ngwa, Foto na ụda, Ihe ngosi
Anyi nwere abali iri-abuo na onwa iri n’abuo n’ime February. Taa bụ ụbọchị Samsung, nchere ahụ abaghị uru. Na mgbakwunye na ị ga - ezute onye na - ahụ maka eziokwu taa na ụdị dị iche iche dị, Samsung Galaxy S20, enwere ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ nke welitere atụmanya. N'ime izu a, enweela ọtụtụ okwu banyere Samsung ekweisi ọhụrụ. Mana o dochaghị anyị anya na anyị ga-enwe ohere izute ha n’ehihie a.
Mgbe ọtụtụ ihe ịtụnanya nke usoro ihe omume ọhụrụ a ewetaworo, enweela ohere maka ọhụrụ Galaxy Buds site na Samsung, ekweisi dị njikere iji guzozie ApplePP nke Apple n'onwe ya. Na-enweghị mgbagwoju na ịmara na ha nwere elele karịa ụdị ọ bụla ọzọ, ha ewetala ụzọ dị oke egwu na mpaghara ahụ.
1 Ozi sitere na Galaxy Buds
2 Akwa-ọgwụgwụ ihe na imewe
3 Galaxy Buds bụ onye ama ama karịa AirPods
Ozi sitere na Galaxy Buds
Samsung si Galaxy Buds ekweisi mechara nyefee akụkọ na-atọ ụtọ na mpaghara ahụ, ma oge ruru. Ha bụ ndị mbụ batara n'afọ a, ya mere, n'ihi na ọ bụ Samsung, ha ga-abụ isiokwu nke ọkụ niile. Ebumnuche bụ ime mgbanwe na nhọrọ dị ugbu a na ahịa. Anyị na-ahụ etu Samsung si kwado ihe ọhụụ, ha wee gosipụta n'eziokwu na a ka nwere ohere maka ya. Ọ dị mma maka Samsung.
Ọ bụghị ihe ọhụrụ, ọ bụkwa ihe dị adị n'ụdị dị iche iche. Galaxy Buds nwere ụdị kachasị ọhụrụ nke Bluetooth 5.0 njikọ.Kpụrụ ndakọrịta n'etiti ngwaọrụ ndị na-eme ka njikọ ahụ guzosie ike ma na-aga n'ihu n'oge niile. Samsung na - ahọrọ itinye ekweisi ọhụrụ ya ọkwa nke nkwụsi ike na njikọ nke na-enye ahụmịhe kachasị mma nke onye ọrụ kwere omume. Nsonaazụ na-akwado njikọta a, ụlọ ọrụ Korea weghaara ya na ụdị ọhụụ ya.
La Nchaji ikuku Ọ bụ otu n’ime àgwà ndị edere n’ime izu ndị a. Ihe ndị ọzọ dị mma maka gadjet a na-echere ogologo oge nke anyị nwere mmasị na ya. Ọzọkwa, Mgbe ha kwenyesiri ike na nkwụnye ụgwọ ikuku na Samsung Galaxy S10 a ma ama n'oge na-adịbeghị anya, ha ghọrọ ezigbo enyi. Inwe ikuku na-akwụ ụgwọ na-eme ka ha bụrụ ihe ntanetị ọzọ. Okwu wireless na-azụkwu uche.
Ihe ohuru n'ụdị mmelite bụ ịrụwanye ọrụ batrị. Ọhụrụ ekweisi Samsung gosipụtara a 58 mAh batrị gịnị ka ha kwere nkwa ruo awa 6 nke iji na-aga n'ihu. Karịa onye bu ya ụzọ. Ọzọkwa, na otu ụgwọ 15 nkeji na ya ikpe anyị nwere ike ịnụ ụtọ mmezi otu awa na ọkara nke nnwere onwe.
Anyị nwere metụ aka elu nke anyi nwere ike iji mekorita egwu na oku. E wezụga nke ahụ Samsung olu olu, Bixby, A gụnyere ya ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ọgụgụ isi dị ka ike gị.
Akwa-ọgwụgwụ ihe na imewe
Samsung elekwasịwo anya n’inye ụdị ekweisi ekweisi na-enweghị eriri nke gafere n'ihi ọtụtụ ihe. Icon Xs enwetaghị ihe ndị ụlọ ọrụ ahụ tụrụ anya ya. Ma echiche a bụ na nke a anaghị eme ọzọ. Na-enweghị ịbụ a ogbenye mma ekweisi, ọ dịghị mgbe ire ahịa ha si n’ala daa ma ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịmalite site na mmalite ya.
Autonomy bụ nnukwu ikiri ụkwụ Achilles nke Akara X. Ọ bụ ezie na Ibi na oge na mwepụta nke AirPods adịghịkwa mfe. Ugbu a nwere usoro emere ọhụụ ma dị njikere karịa onye ọ bụla, Samsung na-etinye kaadị niile na tebụl nwere ekweisi zuru oke na ahịa ruo taa.
Anyị na-amalite site na ihe dị ka ihe eji eme nmana ndị emecha na-emezu ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya. Nhọrọ nke agba bụkwa ihe amamihe. Agba ọcha na-adị mma na ụdị isi okwu a, na ọdịdị nke ikpe / chaja na-adọrọ adọrọ. Anyị nwere ike ịchọta ha na agba ojii, ọcha na odo.
Igweisi nwere usoro akpọrọ intraral, nke ndị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ime ntị. A usoro na ma ị hụrụ ya n’anya ma ọ bụ kpọọ ya asị. "Ala" ha na-ewetakarị bụ nke ahụ ezigbo mgbanwe larịị siri ike nweta maka ụfọdụ. Etinyeghị na ntị n'ụzọ kacha mma Ọ ga-ekwe omume na nghọta banyere àgwà anyị na-enweta enweghị ihe jikọrọ ya na ihe ngwaọrụ ahụ nwere ike inye.
Iji nweta ihe zuru oke ma nwee ọ enjoyụ na ụda ha na-eweta n'ịma mma ya niile, Samsung gụnyere atọ dị iche iche nha nke "rubbers"nke na-abanye n'ime ntị n'onwe ya. Nkọwapụta nke nwere ike ime ọdịiche dị n'etiti ezigbo ahụmịhe onye ọrụ na nke mediocre.
Galaxy Buds bụ onye ama ama karịa AirPods
N'ihi enweghị na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ nke ọdụ ụgbọ mmiri 3.5 Jack, wireless ekweisi na-na-adịbeghị anya ndị kasị "dị mkpa" gadjet. Inwe ekweisi ikuku bụ ihe anyị na-ebute ụzọ karịa ọtụtụ ngwa ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na anyị achọghịkwa eriri maka ịkwụ ụgwọ, nke ọma, ka mma.
Na ụdị ndị kachasị ọhụrụ nke smartphones chọrọ ihe nkwụnye ihe na-adịghị mma iji nwee ike iji isi okwu ọ bụla. N'iburu n'uche ọnụego nke ahịa na-agbanwe, eriri ndị ahụ na-abaghịzi uru. Samsung na-esonye na omume a site na ịnye ụdị dị mma yana yana atụmatụ zuru oke iji ghara inwe ihe mgbagwoju anya.
Galaxy Buds apụ a kpachapụrụ anya imewe nke ahụ na-aga nke ọma site n'ile anya. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ikwu na ha dị ka ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ. Ọ na-ekele na ha enweghị "mmụọ nsọ" na onye isi na-eti aka, ndị AirPods. Inye ngwaahịa pụrụ iche na nke ezigbo ya na-adịwanye mgbagwoju anya, Samsung gbalịsiri ike ime nke a.
N’ịtụle nkọwa ha, atụmatụ ha na ihe ọ bụla ha nwere ike inye, anyị nwere ike ikwu nke ahụ AirPods anaghịzi ejide ocheeze ahụ. Ọ bụrụ na ha nwere ya. Na mgbakwunye, ọ dị mkpa ịmara na ọnụahịa nke ekweisi ọhụrụ a ga-adị n'okpuru ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya. Pricegwọ ya ga-abụ dollar 130, n'okpuru ihe ihe eji eme AirPods ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe ngosi » Kpoo igwe isi ohuru nke Samsung Galaxy Buds Bluetooth